29inch Eletriki enyere igwe kwụ otu ebe | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik 29 * 2.35 anụ ọhịa eletriki nyere aka igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye A6AH26
Moto: 36V 250W / 350W Hub Motor
Batrị: Batrị 36V 10Ah Lithium
Ngosiputa: Ihuenyo LCD3
Brak: N'ihu & N'azụ 160mm Disks
Taịa: Ọpụpụ 29 * 2.35 inch
Nkwusioru: Nkwụchi n'ihu Nkwusioru
Ogologo Max: 40-60km
Ibu Max: 120-150kgs
29 * 2.35 anụ ọhịa eletriki nyere aka igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye
29 igwe elekere asatọ eletrik enyere igwe kwụ otu ebe ugwu adabara ndi mmadu toro ogologo, mee ha ka ha gba ije. Classical triangle ugwu igwe kwụ otu ebe egwuregwu wiht zoro batrị desing -eme ka dum ọdịdị nke igwe kwụ otu ebe ugwu igwe yiri ya na mgbe igwe kwụ otu ebe. Ọbụlagodi, enwere 6 Enyemaka Pedal (site na ọkwa 0 ruo 5) iji dozie ọsọ dị iche iche maka mkpa gị mgbe ị na-agba n'okporo ụzọ ma ọ bụ n’elu.
250W / 350W brushless motor bụ karịa arụmọrụ pasent 80 na n'okpuru 60 Db mkpọtụ, nwee ahụmịhe ịnya ịnya igwe abụghị nrọ. Nnukwu ọsọ na-arụ ọrụ moto nwere ike inye igwe kwụ otu ebe ruo 25km / h-30km / h. Motorgbọala na-eme igwe ịnya igwe gị nwere ụzọ abụọ iji gbaa ọsọ - ịgba ọsọ dịka igwe kwụ otu ebe nkịtị na igwe eletrik dị ọcha na-eji ọkwọ ụgbọ ala.
Ihe batrị zoro ezo na-eme ka eletriki nyere igwe kwụ otu ebe n'ozuzu ya na-adịwanye mma karịa. N'etinye ya na batrị lithium 36v 10ah dị ka ịnye ọkụ, ịnya 40-60km abụghị nsogbu. Ọrụ mbughari nwere ntụsara ahụ, wepu batrị ngwa ngwa ma were ya ka ọ chajie gị n'ebe ọ bụla (n'ụlọ ma ọ bụ ọfịs). Naanị awa 5-6 nwere ike mezue ụgwọ zuru ezu na chaja nke 42V 2A.
Ngosipụta LCD nwere arụ ọrụ nwere ike igosipụta igwe eletriki igwe elekere elekere anya anya, anya igwe, temprechọ, ike batrị, ike moto, Max ọsọ wdg na njiri mmiri ya mara mma na-eme ka ọ rụọ ọrụ dị mma na mmiri. Enwere ike ịmara ha data igwe eletriki eletrik ọ bụla.
Eletric na-enyere igwe kwụ otu ebe jiri 29 ″ * 2.35 igwe kwụ otu ebe, nke bu ibu buru ibu na ụdị taya dị iche iche na-agbagharị agbatị na-eme ka esemokwu dịkwuo mma iji meziwanye ụzọ. Ma ọ bụ n'okporo ụzọ ugwu, n'okporo ámá obodo, n'okporo ámá ma ọ bụ n'okporo ámá, ọ nwere ike ijide ha n'ụzọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwe eletriki eletriiki karịa, gaa 48V igwe kwụ otu ebe, hot ere ugwu e-igwe, 350W igwe kwụ otu ebe ugwu igwe kwụ otu ebe, 27.5-inch bafang ugwu ebike.
Tags:eletrik enyere igwe kwụ otu ebe ugwu igwe eletriki ugwu maka ndị okenye
Mbụ: Full nkwonkwo eletrik ugwu igwe kwụ otu ebe wheel A6AH26-SM
Next: Egwuregwu eletriki carbon na-acha igwe eletriki 26 nke anụ ọhịa nwere A6CB26M